အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးအိမ်ကိုအမြဲကိုင်လှုပ်တတ်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးအိမ်ကိုအမြဲကိုင်လှုပ်တတ်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုလေး
ဆိုရှယ် media လောက မှာ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် အဖြစ် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဆရာဝန် မလေး နန်းမွေ့စံကို အ ထူးတလည် မိတ်ဆက် ပေးစရာ မလိုဖူးထင်ပါ တယ်နော် … . ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားပြေပြစ် ညီညာ လှပပြီး ယောက်ျားလေး ပရိသတ် အများ ဆုံးပိုင်ဆိုင် ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် … . တိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်း ရိုးသား တဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်တို ခဏတွင်း မှာပဲ တတိုင်း ပြည်လုံ းရှိ ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ် … .
ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ရေကူးရတာကို ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် … . ရေကူးကန် ထက်က ဆွဲဆောင်မှု ရှိလှသော အလှပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပြသလေ့ရှိ တာ ဖြစ်ပါတ ယ်..။နန်းမွေ့စံရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဟာ ဆိုရင်တော့ photo shooting ရိုက်ကူး လေ့ရှိပြီး၊
ကြော်ငြာ မဂ္ဂဇင်း တွေမှာလည်း သူမရဲ့ အလှ ပုံရိပ်တွေကိုမြင် တွေ့ရမှာပါ … . gym ကို စနစ်တကျ နဲ့ ပုံမှန် ဆော့လေ့ ရှိတာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အမြဲ တောင့်တင်း သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရှိတဲ့အပြင် အမြဲ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင် ပြုံးရွှင် လန်းဆန်း နေတာ ကို မြင်တွေ့ ရမှာပါ … .
crd : Nan Mwe San facebook
ဆိုရွယ္ media ေလာက မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ဆရာဝန္ မေလး နန္းေမြ႕စံကို အ ထူးတလည္ မိတ္ဆက္ ေပးစရာ မလိုဖူးထင္ပါ တယ္ေနာ္ … . ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားေျပျပစ္ ညီညာ လွပၿပီး ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ အမ်ား ဆုံးပိုင္ဆိုင္ ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ … . တိုင္းရင္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္း ရိုးသား တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္တို ခဏတြင္း မွာပဲ တတိုင္း ျပည္လုံ းရွိ ပရိသတ္ေတြက တစ္ခဲနက္ အားေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္ … .
ခရီးသြားျခင္းနဲ႔ ေရကူးရတာကို ဝါသနာပါသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ … . ေရကူးကန္ ထက္က ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလွေသာ အလွပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ဆက္ျပသေလ့ရွိ တာ ျဖစ္ပါတ ယ္..။နန္းေမြ႕စံရဲ့ လတ္တေလာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ ဟာ ဆိုရင္ေတာ့ photo shooting ရိုက္ကူး ေလ့ရွိၿပီး၊
ေၾကာ္ျငာ မဂၢဇင္း ေတြမွာလည္း သူမရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ေတြကိုျမင္ ေတြ႕ရမွာပါ … . gym ကို စနစ္တက် နဲ႔ ပုံမွန္ ေဆာ့ေလ့ ရွိတာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး လိုက္စားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အျမဲ ေတာင့္တင္း သြယ္လ်တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ရွိတဲ့အျပင္ အျမဲ က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ ျပဳံးရႊင္ လန္းဆန္း ေနတာ ကို ျမင္ေတြ႕ ရမွာပါ … .
Previous post အရမ်းမိုက်ပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post အားလုံးက အချိန်အကြာကြီး မှားခေါ်နေကြတဲ့ သူ့ရဲ့နာမည် အရင်းကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း